၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန် လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး အာဏာ သက်ရောက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်ထဲမှ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ခေတ်မီကျင့်ထုံးတွေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပါရှိတဲ့အပြင် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သား၊ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိတဲ့ မူဘောင်ကိုလည်း ထူထောင်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအဖို့ ကုမ္ပဏီဥပဒေကို အလွယ်တကူလိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်တဲ့အပြင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကလည်း လွယ်ကူသွားတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ရော၊ ကုမ္ပဏီတွေကို ထိန်းကျောင်းရမည့် အစိုးရဌာနအသီးသီးအတွက်ရော ပိုမိုထိရောက်သွားစေခဲ့ ပါတယ်။ ပိုပြီးအရေးကြီးတာက ယခင်ဥပဒေဟောင်းမှာ မပါရှိခဲ့တဲ့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ အပြည့်အစုံပါဝင်လာတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံ တကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဘို့ များစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနဲ့ ဥပဒေလိုက်နာကျင့်သုံးရာမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ မများပြားစေဘို့ လျော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်နှင့်အတူ အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ဖြစ်တဲ့ Myanmar Companies Online (MyCO) ကို ထူထောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံအတွင်းမှာကော နိုင်ငံပြင်ပကပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး လုပ်လိုသူများအတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်နိုင်ဘို့ များစွာလွယ်ကူချောမွေ့သွားခဲ့ပြီး MyCO ကို သုံးစွဲဘူးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းက ကောင်းချီးဩဘာပေးခဲ့ကြပါတယ်။ MyCO ဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံ အချို့မှာရှိတဲ့ အွန်လိုင်းစနစ်ထက် များစွာပိုကောင်းတယ်လို့လည်း နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များက ချီးကျူးပြောဆိုမှုတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ MyCO ရဲ့ ရလဒ် ကတော့ စတင်ကျင့်သုံးတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်အထိ (၇) လအတွင်း ကုမ္ပဏီအသစ်ပေါင်း ၁၁၆၅၈ ခု မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့အပြင် ယခင်ဥပဒေအဟောင်းအရ မှတ်ပုံ တင်ထားခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၄၆၃၇၇ ခုကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်မှု ကုမ္ပဏီ ၅၈၀၃၅ ခုရှိခဲ့ ပါတယ်။ နှစ်အလိုက် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်နိုင်မှုအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီအရေအတွက် ၉၂၈၆ ခုနဲ့ အများဆုံး မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စံချိန်ကို MyCO က (၇) လအတွင်း သိသိသာသာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများ အွန်လိုင်းမှာ အင်တိုက် အားတိုက်မှတ်ပုံတင် လာနိုင်ခြင်းဟာ ကုမ္ပဏီ ဥပဒေသစ်ရဲ့ ခေတ်မီမှု၊ MyCO ရဲ့ လွယ်ကူရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဘို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ကြာမြင့်တဲ့အချိန်၊ ကုန်ကျတဲ့ ငွေကြေး စတာတွေကို သိသိသာသာ လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက အင်တိုက် အားတိုက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်တဲ့ “Doing Business Report” မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ကို သိသာစွာ တိုးတက်လာစေဘို့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လည်း များစွာအထောက်အကူပြုစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ (Registrar) နဲ့ အထိန်းအကွပ်အဖွဲ့အစည်း (Regulator)
တစ်ချို့ကလည်း မေးကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင် သူတို့ မှန်မှန် ကန်ကန်လုပ်အောင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးက ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမှာလဲ?။ မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေများလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ? စတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းတာလည်း ရှိခဲ့ပါ တယ်။ တကယ်တော့ မေးမြန်းသူအများစုဟာ ကုမ္ပဏီဥပဒေကို ကိုင်တွယ်ထိန်းကျောင်းရတဲ့ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ (သို့မဟုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA) (Registrar) ရဲ့ တာဝန် နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ပြီး ကုမ္ပဏီများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ထိန်းကျောင်းရတဲ့ အစိုးရဌာနအသီးသီး (Regulator) ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို သေချာစွာ သဘောမပေါက်ကြလို့ မေးကြတယ်ဆိုတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဥပဒေနဲ့အညီ ပေးရန်တာဝန်များကို ကန့်သတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်းမပြုဘဲသော်လည်းကောင်း ရှယ်ယာဝင်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထား တဲ့ စီးပွားရေးအစုအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ဥပဒေအရ မွေးဖွား ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သီးခြား ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေဝေါဟာရ တွေမှာ ကုမ္ပဏီကို “ဥပဒေအရ ပေါ်ပေါက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် (Legal or Juridical Person)” လို့ ခေါ်ပြီး လူသားကိုတော့ သဘာဝပုဂ္ဂိုလ် (Natural Person) လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဟာ လူသားတစ်ယောက်လိုဘဲ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ရှင်သန်ခွင့်၊ တရားရင်ဆိုင်ခွင့် ရှိနေတာ ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေက ကုမ္ပဏီဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို လိုက်နာခြင်း ရှိ/မရှိကို DICA က စိစစ်ထိန်းကျောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် DICA ဟာ ကုမ္ပဏီတွေကို မှတ်ပုံတင်ပေးရုံသာမက ကုမ္ပဏီဥပဒေကိုလည်း ထိန်းကျောင်းရတဲ့ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံသားတွေကို “လဝက” ကစိစစ်ပြီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသလို DICA ကလည်း ကုမ္ပဏီ လဝက ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ခွင့်ပြုမိန့်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ် စသည်တို့ ရယူရမှာဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အထိန်းအကွပ်အောက်မှာ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်လိုလျှင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ဟိုတယ် လိုင်စင်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်း လုပ်ချင်ရင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှာ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်၊ ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ချင်ရင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဆေးရုံလိုင်စင်၊ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်း လုပ်လိုလျှင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် စတာတွေ ရရှိမှသာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ DICA မှာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်ဘို့ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဥပဒေနှင့်အညီ မွေးဖွားသန့်စင်ပေးလိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက DICA မှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင် လုပ်ငန်းစလုပ်လို့ရပြီလို့ ထင်နေကြတာ မမှန်ပါဘူး။ ယခုဆိုရင် Social Media မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိစ္စဆိုရင်- ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို လျှောက်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ အလုပ်စလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ လျှောက်ထားခြင်း မရှိသေး သလို ခွင့်ပြု ချက်ရရှိခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ပေးထားခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မမှန်မကန်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဘယ်သူက အရေးယူမှာလဲ?
စီးပွားရေးနယ်ပယ်အတွင်းက မမှန်မကန် လုပ်ကိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ ဥပဒေ ချိုး‌ဖောက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ DICA က ဘယ်လိုအရေးယူမှာလဲလို့လည်း မကြာခဏ မေးလေ့ ရှိပါတယ်။ တကယ်က ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ထိန်းကျောင်းတဲ့ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းကသာ အရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဥပဒေကို ချိုးဖောက်လာမှသာ DICA က ကုမ္ပဏီဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း ပြောရရင်တော့ ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို အရေးယူခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက ဆောင်ရွက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကို “လဝက” က နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးထားတာမို့ “လဝက” က အရေးယူလို့ မရသလို ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းကသာ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီက ဒါရိုက်တာတွေက ကုမ္ပဏီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ ဒါရိုက်တာရဲ့ တာဝန်တွေ၊ အရည်အချင်းတွေ ချိုးဖောက်ပျက်ကွက်ခဲ့ရင် DICA အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်အညီ လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အပြင် မရိုးမသားမှုတွေပါခဲ့ရင် တရားရုံးက သီးခြား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့အထိ တရားစွဲဘို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ခေတ်မီတဲ့ ကုမ္ပဏီဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးလိုက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခုကို ချမှတ်ထူထောင်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဥပဒေဟာ စနစ်တကျ လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ ကုမ္ပဏီများအားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အထောက်အမတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီများ အနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို MyCO ကတဆင့် လွယ်ကူရှင်းလင်း မြန်ဆန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ကြပြီးနောက်မှာ စီးပွားရေး နယ်ပယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ကြဘို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကို လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်တင်ပြလျောက်ထား သွားကြဘို့ လိုအပ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။